Hooyo iyo Ilmo Ay Dhashay Oo Haraad iyo Macaluul Ugu Geeriyooday Meel 8KM U Jirta Burco | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hooyo iyo Ilmo Ay Dhashay Oo Haraad iyo Macaluul Ugu Geeriyooday Meel 8KM U Jirta Burco
Published on November 29, 2016 by sdwo · No Comments
Burco (SDWO.com): Laba qof ayaa la sheegay in ay maanta haraad iyo gaajo ugu geeriyoodeen degaanka loo yaqaano Ceesha oo qiyaastii 8KM oo dhinaca woqooyi ah ka xigga magaaladda Burco.
Labadda qof ee geeriyooday ayaa la sheegay in ay ahaayeen hooyo iyo ilmo yar oo dhashay, kuwaasi oo ay haleeshay macaluusha cunto la’aaneed iyo haraadka degaamadaasi ka jira ee ka dhashay abaarta.
Ruuxa dumarka ahayd ee geeriyootay ayaa la sheegay in ay Umul ahayd, isla markaana iyadii iyo ilmaheediiba ay halkaasi ku dhinteen.
Jaamac Siciid Nuur, oo ay xaaskiisa ahayd gabadha geeriyootay, isla markaana ah aabaha dhalay ilmaha la geeriyooday hooyadii waxa uu ka hadlay sida ay geeridaasi u dhacday.
Waxaanu yidhi “Anigoo ah Jaamac Siciid Nuur, iyadoo ay geeriyoodeen xaaskaygii iyo ilmo ay dhashay, una geeriyoodeen caafimaad darro iyo haraad”.
Muuqaal Video ah oo lagu baahiyay shebekadaha wararka iyo baraha bulshadda ku kulanto ee Internet-ka ayaa waxaa ka muunaya dadweyne isugu jiray odayaasha degaankaasi, xildhibaan ka tirsan golaha degaanka Burco iyo dad weyne kale oo ku ururay goobta ay geeridaasi ka dhacday.
Waxaanay dadkaasi qaarkood saxaafadii goobta joogtay la hadlay ka dayriyeen xaaladda nololeed ee ay guud ahaan ay dadka degaankaasi ku sugan yihiin. Iyagoo gudiga abaaraha gobolka Togdheer iyo maamulka gobolka-ba ku eedeeyay in aanay marnaba waxba ka gaadhsiinin raashimadda kala duwan ee caawimadda ah.
Dadka degaanka Ceesha ayaa si weyn uga tiiraan-yaysan biyo la’aan iyo macaluul is-biirsaday oo haysta, isla markaana qarka u saaran in ay dad badani u dhintaan.
Degaanka Ceesha ee ay hooyada iyo ilmaha ay dhashay ku geeriyoodeen ayaa ka mid ah meelaha ay abaarta daran ku hayso dadka, isla markaana ay dhamaanba xoolihii ka baxeen, iyadoo la sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin qoysas badan oo la liita diifta gaajadda iyo haraadka.
Waa markii u horaysay ee ay soo baxdo dhimasho laga soo sheegay in ay ka dhacday degaamadda goboladda bariga ee ay abaartu ka jirto, iyadoo meeshan ay maanta dhimashadu ka dhacday wax yar u jirto magaaladda Burco.